Wasiirka Cayaaraha oo si dadban u qirtay eed loo jeediyay | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiirka Cayaaraha oo si dadban u qirtay eed loo jeediyay
Sida aan dhawaan baahinnay, tan iyo guuldarradii kooxda Xulka Qaranka ka soo gaartay dalka Oman, waxaa taagan eedo loo jeedinayay Wasiirka isboortiga Soomaaliya, wuxuuna si dadban u qirtay mid kamid ah eedeeyaha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Wasaaradda Dhallinyarada iyo Cayaaraha, Xamza Siciid Xamza, oo hore loogu eedeeyay si xun u xooleysi (musuq baahsan), ayaa si dadban u sheegay inuu qeyb ku leeyahay masuuliyadda guuldarradii xulka qaranka ka soo gaartay dalka Oman.
Wasaaradda Cayaaraha, waxaa hoos yimaada dhamaan xiriirrada kala duwan oo Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed (SFF) ugu muhiimsan yahay, hayeshee Wasiir Xamza, wuxuu si cad u sheegay in Xiriirka Kubadda Cagta aysan wax wada-shaqeyn ah kala dhaxayn Wasaaradda, taas oo layaab ku noqtay bahda Sports-ka.
Isagoo ka jawaabayay su’aal la xariirta kubadda cagta, Wasiirka dhallinyarada, wuxuu xusay, in uusan waxba kala socon habka xiriirka uu hoggaamiyo Cabdiqani Siciid Carab, uu u maro soo xulidda ciyaartoyda mataleysa qaran, wuxuuna ku eedeeyay maamul xumo.
Dhanka kale, Wasiir Xamza, wuxuu guud ahaan ka hor yimid, ciyaartooda Soomaaliyeed ee laga soo aruuriyo Yurub iyo Waqooyiga Ameeriga, si ay u matalaan qaranka, wuxuuna sheegay in ay mudnaanta koobaad leeyihin dhallinyarada ka ciyaarta gudaha dalka.
Hadalkaas, waxaa loo fasirtay kala jabin u wasiirku ku sameeyay ciyaartoyada, waxaana hore isla qodobkaan ugu edeeyay qaar ka mid ah xiddigaha Xulka oo uu ugu horreeyo Axmed Saciid Casanyo, oo ah kabtanka dalka, kuwaas u sheegay in Xiriirka Kubadda Cagta iyo Wasiir Xamza ka badiyeen kooxda Qaranka, masuulna ka yihiin guuldarrooyinka.
Kadib hadalka Wasiir Xamza, bahda Cayaaraha ayaa si weyn isku weydiiyay, waxa ay u taagan tahay Wasaaradda Sports-ka, haddiiba aysan wax wada shaqeyn ah la lahayn Xiriirka Kubadda Cagta, isla markaana uusan wasiirku wax xog ah ka hayn wax la xariira Xulka Qaranka.
Dhawaan ayaan baahinnay in qaar ka mid ah Madaxda Xiriirrada ka jira ddalka, ay qoreen waraaq ay ku codsanayaaan inuu si deg deg ah isku casilo Wasiirka Sportska, kadib markii ay ku eedeyeen inuu lunsaday lacag gaareysa $1.8 milyan oo ka timid UNFPA iyo FIFA.